သောသီခို: ဆေးကျောင်းသူ နော်မေသူသူဇော် သေဆုံးမှု နောက်ဆက်တွဲ သတင်းများ
ဆေးကျောင်းသူ နော်မေသူသူဇော် သေဆုံးမှု နောက်ဆက်တွဲ သတင်းများ
မတရားတာတွေကို လက်ပိုက်ကြည့်မနေတတ်တာ ကျနော်တို့ သောသီခို့ အဖွဲ့ သားများရဲ့ DNA ပဲ...သို့ ဖြစ်ပါ၍ လူယုတ်မာနှင့်မတရားသောစီရင်မှုများ အများပြည်သူရှေ့ မှောက်ရောက်အောင် သတင်းများကို လက်လှမ်းမှီသ၍ ဆက်လက်တင်ပေးပါအုံးမည်။
အောက်ပါသတင်းအတိုအစများသည် ဖေ့ဘွတ်စာမျက်နှာတွင် ပလူပျံနေသောအကြောင်းအရာများဖြစ်သည်။ သက်ဆိုင်ရာလင့်များကို သွားပြီးဖတ်လျှင် ဖြစ်ပျက်ပုံဇာတ်လမ်းကို ခြုံငုံသုံးသပ်နိုင်ကြမည်ဖြစ်သည်။
မေသူသူဇော် အသတ်ခံရပြီးနောက် ဆေးကျောင်းသား ရဲမင်းဦးမှ မေသူသူဇော်နဲ့ ကာမဆက်ဆံဖူးခြင်း မရှိဟု သက်သေထွက်ဆိုခဲ့သည်။ မှုခင်းဆရာဝန် ဒေါက်တာ ရဲဝင်း၏ ဆေးလက်မှတ်တွင် သေဆုံးသူသည် သေဆုံးပြီးနောက် အပျိုရေ မပျက်ဟု လက်မှတ်ထုတ်ပေးခဲ့ပါသည်။ သို့သော် ရဲမင်းဦး နဲ့ မေသူသူဇော် တို့ရဲ့ ဖုန်းမေ့ဆက့်တွင် ရဲမင်းဦးမှ တားဆေးသောက်ခိုင်းနေတာကို မေသူသူဇော်မှ ငြင်းဆန်လာသည်ကို သက်သေအဖြစ် အခုထိ ဖုန်းနဲ့ ဂျီထော့ ထဲတွင် ရှိနေသေးသည်။ ရဲမင်းဦး၏ ဖခင် နဲ့ မှုခင်းဆရာဝန် ဒေါက်တာ ရဲဝင်းတို့သည် မိတ်ဆွေများ ဖြစ်ကြသည်ဟု သိရပါသည်။ အခုသူ့ Facebook အကောင့်မှာလဲ သူ့ဓာတ်ပုံတွေအားလုံးကို ဖြုတ်ထားပါတယ် More Photos >> www.myanmarcelebritiesnews.com
<< ကျော်ကြားသူများရဲ့အတွင်းရေး Yesterday လူယုတ်မာ တစ်ယောက်ကြောင့် အကြွေစောခဲ့ ရသည့်ဆေးကျောင်းသူ လေးတစ်ယောက် ရဲ့ အမှန်တရားတစ်ခုအတွက် Share လုပ်ပေးကြစေလိုပါတယ် သူ့ အတွက်အမှန်တရားတစ်ခုကိုဝိုင်းဝန်းရှာဖွေ ပေးကြပါ...။ ဒီဖြစ်စဉ်မှာ ကောင်မလေးက သူ့ ကိုယ်သူ သေကြောင်းကြံစည်ခဲ့ တယ်ဆိုပြီး သာမန်ရေနစ်သေဆုံးမှု တစ်ခုအဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့ သလို လူသတ်သမား ဟု သံယသရှိသူကိုပါ ကွင်းလုံးကျွတ်လွှတ်ပေးခဲ့ ပါတယ် ဒီဖြစ်စဉ်ကိုသေချာလေ့ လာ ကြည့် ရင် သံသယဖြစ်စရာတွေ ဟာကွက်တွေ တရားရေးမဏ္ဍိုင်မှ မှားယွင်းစွာ စီရင်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ တာတွေကိုလေ့ လာတွေ့ ရှိရမှာပါ ဒီတော့ ကျွန်တော် တို့အားလုံး တတ်နိုင်တဲ့ ဘက်ကနေ အမှန်တစ်ရား တစ်ခုအတွက် အချိန်မတိုင်ခင် လူလောကကြီး ကို နှုတ်ဆက်ထွက်ခွာသွားခဲ့ ရသူဆေးကျောင်းသူလေးအတွက် အမှန်တရားတစ်ခုကို ၀ိုင်းဝန်းဖော်ထုတ်လိုက်ကြရအောင်လားဗျာ...။
(Photo ကတော့ဆေးဆုံးသူကောင်မလေးရဲ့ ရည်းစားဖြစ်သူ လူသတ်သမားဟု သံသယရှိသူ ဆေးကျောင်းသား ဆေး-၁ က ရဲမင်းဦး ဆိုသူပဲဖြစ်ပါတယ်) ရဲမင်းဦး ရဲ့Facebook လိပ်စာကတော့( https://www.facebook.com/yair.yair.31945 ) ပဲဖြစ်ပါတယ် ။ ဒါကတော့ ဒုတိယမြောက်လူသိရှင်ကြားဖော်ထုတ်တဲ့ နောက်ထပ် ဆေးကျောင်းသား လူယုတ်မာ ရဲမင်းဦးပါ http://www.news-myanmar.com/2014/01/blog-post_9247.htmlဆေး-၁ မှဆေးကျောင်းသားလူယုတ်မာအကြောင်းများ (သေဆုံးသူကောင်မလေးရဲ့ ဝမ်းကွဲညီအစ်မတစ်ယောက်ရဲ့ ခံစားချက်များ အပိုင်း - ၁ ) http://www.news-myanmar.com/2014/01/blog-post_23.htmlဆေး-၁ မှဆေးကျောင်းသားလူယုတ်မာအကြောင်းများ (သေဆုံးသူကောင်မလေးရဲ့ ဝမ်းကွဲညီအစ်မတစ်ယောက်ရဲ့ ခံစားချက်များ အပိုင်း - ၂ ) http://www.news-myanmar.com/2014/01/blog-post_8673.html“ နော်မေသူသူဇော် ”(လူယုတ်မာတစ်ယောက်ကြောင့် ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ ကြွေလွင့် ခဲ့ ရသူလေး) http://www.news-myanmar.com/2014/01/blog-post_7089.htmlနော်မေသူသူဇော် သေဆုံးသည့် နေ့ မှ ဖြစ်စဉ်များ http://www.news-myanmar.com/2014/01/blog-post_5791.htmlသေဆုံးသူကောင်မလေးကအပျိုစစ်စစ်ပါ သာမန်ရေနစ်သေဆုံးမှုပါ ဟုဆိုကာစီရင်ချက်ချခဲ့ သော်လည်း..( ဒီသက်သေတွေကဘာတွေပါလဲ ? ) http://www.news-myanmar.com/2014/01/blog-post_1998.html ဖြစ်စဉ်များကို လူယုတ်မာတို့၏သဂျိုင်း (https://www.facebook.com/groups/528390450577180/582829635133261/ ) တွင် အပြည့် အစုံဖော်ပြပေးထားပါသည်။ တတ်နိုင်တဲ့ ဘက်က အကူညီပေးလိုသူများအနေနဲ့ အောက်ပါ Note လေးကိုဖတ်ပေးစေလိုပါသည် https://www.facebook.com/notes/aüñg-kÿáw-sôë-npg/လူယုတ်မာတစ်ယောက်အကြောင်းကို-အားလုံးသိအောင်မပြောပြချင်ဘူးလား-သူငယ်ချင်းတို-့-/1458662217686582- ကဲ.... ဗျာ Facebook အသုံးပြုသူတိုင်းပါဝင်ပြီးတော့ အကူအညီပေးလို့ ရပါပြှီSocial Network Media Attack လေး တစ်ခုလုပ်ဖို့အားလုံးကို ကမ်းလှမ်းပါတယ်ဗျာ အားလုံးပါဝင်ကူညီပေးနိုင်ပါပြီ အထက်ပါ Note လေးကိုဖတ်ပြီး ပြုလုပ်ကြည့် ပေးပါဗျာ - Aüñg Kÿáw Sôë Npg ထံမှကူးယူဖော်ပြပါသည်။
မွန် စံ shared Nayyi Zan's status. January 24 23.4.2013 9:00 PM အမဖြစ်သူ ခမ်းမွန်ထွေး နှင့် ဦးလေးဖြစ်သူ စောဒါးနေတို့အား ဘုရင့်နောင်ရဲစခန်းမှ ခေါ်ယူစစ်ဆေးခဲ့သည် ထို့အချိန်၌ ရဲမင်းဦးဖခင်ထံမှ ဖုန်းဝင်လာသည် မသူ၏အလောင်း အင်းစိန်ဆေးရုံ၌ ရှိနေကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည် ( ထူးဆန်းနေသော အခြေအနေ တရပ်ပင် ဖြစ်သည် ) မိသားစုများဆေးရုံသို့ ရောက်ရှိသောအခါ မှု ခင်းဆရာဝန် ဦးရဲဝင်းမှ အလောင်းမရှိတော့ဟု ပြောကြားသည် သူနာပြုဆရာမကြီးမှ အလောင်းရှိသေးကြောင်း ဆရာဝန်ကြီးနှင့် အတိုက်အခံ ဖြစ်ခဲ့သော်လည်း အလောင်းအားမရှိတော့ဘူးချည်းပြောနေ၏ ထို့နောက် မသူ၏ပါချုပ် (ဆေးဘက်ဆိုင်ရာနည်းပညာတက္ကသိုလ် ) ရောက်ရှိလာပြီး မှုခင်းဆရာဝန်ကြီးနှင့်တွေ့ဆုံပြီးမှ အလောင်းအားထုတ်ပေးခဲ့သည် ထိုနေ့၏ထူးခြားချက်များ ရဲမင်းဦးဖခင် မှ အလောင်းရှိ ကြောင်းကို ကြိုသိနေခြင်း မသူအလောင်းအား20.4.2013ကတည်းကပိုင်ရှင်မဲ့အလောင်းအဖြစ် အင်းစိန်ရဲစခန်းမှ ပို့ဆောင်ထားခြင်း ဆေးရုံစည်းကမ်းအရ အလောင်းတဦးအား ၃ရက်ပြည့်မှ သဂြိုလ်ခွင့်ပြုထားသော်လည်း ၂ရက်ဖြင့်သဂြိုလ်ခွင့်ပြုလိုက်ခြင်း ( အလောင်းလာသယ်ကားမှာ ပျက်နေသောကြောင့် အလောင်းကို ရလိုက်ခြင်းဖြစ်သည် ) လူတဦးထံမှ ပြောသံ အလောင်းရသွားတော့ကံကောင်းတာ တဲ့ ထူးခြားချက် ကျွန်မတို့ မိသားစုအားလုံးထက် လူတစုက အရာရာအားလုံးကို ကြိုတင်၍သိနေသည်လည်း ထူးခြားချက်ဖြစ်သည် — with Khanmon Htwe. https://www.facebook.com/deadvoldemort
feed sad sorry to her. hope the government will investigate the case with fair result to her and her family.
M mon said...